Burmese, Tracts, ဝေစာ 06 -- သခင်ဘုရား၌ အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ | Waters of Life
Home -- Burmese -- Tracts -- Tract 06 (Rejoice in the LORD Always!)
This page in: -- Armenian -- BURMESE -- Chinese -- Dagbani? -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- Thai -- Turkish? -- Twi -- Uzbek -- Yoruba
ဝေစာအမှတ်စဉ်6-- သခင်ဘုရား၌ အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ (ဖိလိပ္ပိ ၄း၄)
ရုပ်မြင်သံကြားကို ကြည့်ရှုသောသူတိုင်း မြင်တွေ့သောအရာသည် Disco မှာ ကခုန်ပျော်မြူးသော လူအုပ်ကြီး၊ အန္တရာယ်များစွာကြားမှ တောင်တက်သမားများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ မြင်တွေ့ဖုူးမှာပါ။ အများသော လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် လစ်ဟာသောသူတို့နှလုံးသားပျော်ရွှင်မှုရရှိရန် ကြိုးစားကြပါတယ်။ နောက်ထပ်အုပ်စုတစ်စုတော့ ပျော်မွေ့ဖို့ရန် ပြဿများကို မေ့လျော့ဖို့ရန် ပိုက်ဆံသုံးဖြုန်းကာ အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ အသက်ရှင်ကြသည်။ မတရားသောအမှုသည် သူတို့အပေါ်သို့ ပြုတ်ကျနေသောကြောင့် အခြားသူများ ညည်းတွားရှာပါသည်။
လူနည်းစုကသာ ဘုရားထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ အဘယ်အရာသို့ ပြုရမည်နည်း? ဘာကိုလုပ်ဖို့နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်သို့ပြုသင့်၊ မပြုသင့် သနည်း? စစ်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ခြင်းကို ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ကြေကွဲပဲ့ကြွေနှလုံးသားကို ငြိမ်းချမ်းပေးမှာဖြစ်တယ်။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီး နစ်မြှပ်နေသော လူများ၏ အရေအတွက်သည် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးမြှင့်နေတာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့မှာ ဘဝမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူး။ ဤစိတ်ဆင်းရဲသောသူတွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှု အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှာတွေ့နိုင်မည်လား?
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် စစ်ပွဲများအလယ် ပရောဖက်နေဟမိ ဆုတောင်းခြင်း အဖြေအဖြစ် ဘုရားသခင် ဗျာဒိတ်တော်ကား “ဝမ်းမနည်းကြနှင့်။ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော အခွင့်နှင့် အားယူ၍ ဝမ်းမြောက် ကြလော့ဟု လူအပေါင်းတို့အား ဆိုကြ၏” (နေဟမိ ၈း၁၀)
ထာဝရဘုရားကိုသာ အားကိုးကြရအောင်။ သူသည်သာ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက် ခြင်းကို ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
ပရောဖက် လက်ခံရရှိသော ဗျာဒိတ်တော်က ဘာကို အထူးနှစ်သိမ့်ပေးလဲ? ထာဝရဘုရားက သူသည် သူကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြောင်းကို သူတို့အား ပြောသည်။ သူက လူသားများ ဒုက္ခ ရောက်နေတာကို ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်သောဘုရားမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ဝမ်းမြောက်သော စိတ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ သူသည် လူသားအားလုံးတို့အတွက် ရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကို မွေးဖွားပေး တော်မူ၏။
အရာအားလုံးကို သိတော်မူသော ထာဝရဘုရားသည် ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံနိုင်မှန်းကို သိသောသူ ဖြစ်တယ်။ ထာဝရဘုရား၏ အကြံအစည်တော်သည် လူသားတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိကာ ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းကို ပေးစေခြင်းငှာ အလိုရှိပါတယ်။ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော အခွင့်နှင့် အားယူ၍ ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။ အထံတော်သို့ နောင်တစိတ်နဲ့ ရောက်လာသောသူသည် ခွန်အားနဲ့ ဝမ်းမြောက် ခြင်းကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ထာဝရဘုရားတပါးတည်းသာ ငြိမ်သက်ခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
သိုးထိန်းများသည် သိုးစုကို ညအချိန်စောင့်ရှောက်နေစဉ် ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်များ၏ ဘုန်းအသရေနဲ့ ဗက်လင်မြို့သည် ရုတ်တရက် ထွန်းလင်းထင်ရှားလာသည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှ အလင်း သည် သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ထွန်းလင်းတဲ့အခါ သိုးထိန်းများသည် ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ တုန်လှုပ်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှာ ကောင်းကင်တမန်သည် မကြောက်ဖို့ရန် ခွန်အားစကားပြောသည်။ “ထိုပြည်မှာ သိုးထိန်းတို့ သည် ညဉ့်အခါ တောအရပ်၌ တည်းခိုလျက်၊ မိမိသိုးစုကို စောင့်နေကြသည်ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် သူတို့အနားမှာပေါ်လာ၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်ထွန်း တောက်သဖြင့်၊ သူတို့သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ကြောက် ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသိတင်းကို ငါသည်သင်တို့အား ကြားပြောရ၏။ ယနေ့တွင် ဒါဝိဒ်မြို့၌ သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်သောအရှင်သည် သင်တို့အဘို့အလိုငှါ ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီ” (လုကာ ၂း၈-၁၁)။
ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များသည် လူသားအားလုံးအတွက် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ သတင်း ကို ယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ ထာဝရဘုရားသည် သူ့ရဲ့ ကရုဏာတော်ကို ပညာရှိ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော သူအတွက် ယူဆောင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ လူသားအားလုံး ဆင်းရဲ့သည်ဖြစ်ပါစေ၊ ပညာမရှိသည်ဖြစ်ပါစေ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ရှေ့ဦးစွာ စာမတတ်သိုးထိန်းများဆီသို့ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကို ပြောကြားခြင်းသည် ထိုသူတို့သည် ဘုရား သခင့်ရှေ့မှာ အတူတန်းတူလူသားတွေဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ကမ္ဘာလူသားအားလုံး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန် ကောင်းကင်တမန်များသည် နှိုးဆော်ပေးတာလဲ? ရွေးနှုတ်သောသခင်သည် လူသားများကို အပြစ်မှ ကယ်တင်ဖို့ရန် ဖွားမြင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၀မ်းနည်းစရာကတော့ သူ့လူမျိုးများသည် သူ့ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆန္ဒမရှိကြဘူး။ ၎င်းတို့၏ မျှော်လင့်ချက်မှာ တန်ခိုးကြီးအရှင်၊ စည်းစိမ်ကြွယ်ဝ၊ မြင့်မားသော လူနေမှု အဆင့်အတန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ ရန်သူများရဲ့လက်မှ စစ်တိုက်အောင်ပွဲခံပေးမယ့် သခင်ကို သူ့လူမျိုးများလိုချင် မျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်။
သူ့လူမျိုးများ ထင်သလိုမဟုတ်ဘဲ အဲဒီအစား ခရစ်တော်သည် စိတ်ဆင်းရဲသောသူ နောင်တစိတ်နဲ့ ရောက်လာသောသူတွေကို သိမ်းယူတယ်။ နေမကောင်းသောသူများ အနာကို ငြိမ်းပေးတယ်။ မိမိတို့အပြစ်များကို လွတ်ပေးတယ်။ နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ပေးတယ်။ မုန်တိုင်းများကို ငြိမ်းစေတယ်။ ဆာလောင်သောသူများကို စာကျွေးမွေးတယ်။
“သင်တို့၌ ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတည်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာ အကြောင်း စုံလင်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဤစကားကို သင်တို့အား ဟောပြော၏” (ယောဟန် ၁၅း၁၁)။
ခရစ်တော်သည် လောကလူသားများ သူ့ကို အမှီပြုသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံမည် အကြောင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။(ယောဟန် ၁၇း၁၃)
ခရစ်တော်သည် သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နောက်လိုက်တပည့်တော်များအတွက်ပဲပေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ့ကိုရန်ပြုမူချင်သော လူသားတိုင်းအတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အပြစ်များကို ခွင့်လွတ်ကာ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့အပြစ်ဖြေခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းကို ရရှိကာ ခရစ်တော်အားဖြင့် မျှော်လင့်ချက်တည်ထောင်ရန် အခွင့်အာဏာရရှိပါတယ်။
ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ကောင်းကင်သို့ တက်သွားပြီး ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကို စေလွတ်ခဲ့ပါတယ် (တမန် ၂း၁၆-၂၁)။ အပြစ်မှ နောင်တရသောသူတိုင်းသည် ဝိညာဉ်တော်အသီးဖြစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းမှစသော ဝိညာဉ်အသီးသီးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃)
စိတ်မသာညည်းတွားသော၊ အပူပြင်းခံစားရသောသူသည် မျှော်လင့်ချက်ရရှိကာ၊ အပြစ်ရှိသော သူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိကာ သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရသောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်။ ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ သား/သမီး ခေါ်ဆိုခြင်းကို ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်။
တမန်တော်ပေါလုက သူ၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ အတွေ့အကြုံကို ဤကဲ့သို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ “သခင် ဘုရား၌ အစဉ်မပြတ် ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြလော့” (ဖိလိပ္ပိ ၄း၄)
ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုပြီး အသက်ရှင်လိုက်နာပြီး သူ့ကိုချစ်သော သူတိုင်းအတွက် ထာဝရဘုရား၏ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် တည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ ယေရှုသည် သူ့ကို ယုံကြည်သောသူများကို ဘယ်လိုအားပေးစကားပြောလဲဆိုရင် “သင်တို့၏နာမည်များသည် ကောင်းကင် စာရင်း၌ ဝင်သည်ကို ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြလော့ မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၁၀း၂၀)။
မိတ်ဆွေ တခါတရံမှာ အထီးကျန်ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ကို ခံစားဖူးပါသလား? သို့မဟုတ် အသက်ရှင် တော်မူသော ခရစ်တော်၌ ရပ်တည်နေပြီလား? ယေရှု၌ ရပ်တည်သောသူသည် ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး မျှော်လင့်စရာမရှိတဲ့ ဘဝတွေမှာ ခရစ်တော်ကို ကိုးစားပါ။
မိတ်ဆွေသည် ထာဝရဘုရား၏ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်၌ ရပ်တည်နေပြီလား? နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာ ကျမ်းစာဖတ်ကာ ခွန်အားယူပါ။ ထာဝရဘုရားသည် ဖြောင့်မတ်သောတရားလမ်းထဲသို့ ဆွဲခေါ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းချက်တွေကို ပို၍သိရှိလိုပါသလား ချစ်သော မိတ်ဆွေ?
ကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့ အခမဲ့စာပေများကို တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကောင်းကို မိတ်ဆွေရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးပါ။ ဒီစာစောင်ကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေတကယ်ပဲ ခွန်အားရရှိကာယေရှုနဲ့ ထိတွေ့သွားရင် အိမ်နီးနားချင်းကိုလည်း မျှဝေ ပေးပါ။ လိုအပ်သလောက် စာစောင်ကိုအခမဲ့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ထံမှ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေရဲ့ သက်သေခံချက်စာစောင်ကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ စာရေးတဲ့အချိန် စာပြန်ပေးဖို့ ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ ရေးပေးထားပါ။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
Page last modified on September 18, 2018, at 10:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)